Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia momba ny fanabeazana • Raharaham-panjakana • LGBTQ • Indostrian'ny fihaonana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • Olona manao vaovao • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • News News
Tamin'ny fotoanan'ny filoham-pirenena Trump: fanekena ny lehiben'ny mpanapa-kevitra
Enga anie 4, 2020
Trump dia miantso ny lalàna famokarana fiarovana amin'ny vanim-potoana mangatsiaka hiadiana amin'ny areti-mifindra COVID-19
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tamin'ny fotoanan'ny filoham-pirenena Trump: fanekena ny lehiben'ny mpanapa-kevitra
Hita, tao anatin'ny fotoana fohy, fa ny fanapahan-kevitra noraisin'ny lehilahy sy ny vehivavy miasa ao amin'ny White House dia noraisina ho tombontsoan'ny orinasa. Ilay mpanapaka mieritreritra fa amin'ny alàlan'ny famporisihana (hanome brib) ny orinasa hisokatra, dia handao ny fiarovana ny tranony ny olona, ​​ary hirohotra hiantsena any amin'ny magazay ao an-toerana hividy - inona?
Misaotra ny Decider-in-Chief, dia nianatra ny hiaina amin'ny kely kokoa izahay. Tsy mila fanitarana volo sy hoho sandoka isika raha avy any amin'ny efitrano fatoriana mankany amin'ny trano fidiovana ary mankany an-dakozia sy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny fivezivezena. Tsy mila fofona mpamorona, volom-bolo frantsay, volomaso sandoka, akanjon'ny mpamorona ary firavaka isika raha ny olona tokana hitantsika sy hiresahana amin'ny fianakaviantsika (na ny tenantsika).
Talohan'ny nahavitan'ny Decider-in -Chief ny fotoana hitazomana ny COVID 19 any ivelany dia nanapa-kevitra ny hamela azy hisasa any Etazonia toy ny onja-dranomasina lehibe izy. Talohan'ny nanakatonan'ny Decider-in-Chief an'i Amerika dia tena nankafy nitety ny lalantsara fivarotana lehibe aho, nitady sombin-kanina vaovao sy matsiro ho an'ny sakafo hariva. Nanantena ny hanatrika zava-pisotro misy alikaola aho mba hahitako ny divay vaovao, be herim-po, mahatalanjona havoaka amin'ny California, New York, Kosovo, France, Italia, ary ireo toby misy divay hafa miandry ao anaty elatra. Tsy andriko izay hijerena ny arabe sy ny fivarotana toeran-kaleha vaovao, hahita maritrano sy famolavolana vaovao sy famoronana ao amin'ny hotely fivarotana, ary hiresaka amin'ireo mpahandro momba ny sakafo vaovao nahavitan'izy ireo.
Raha lany ny fanosotra volo na ny famongorana ny fantsika, tsy olana lehibe izany, nitafy palitao aho, noraisiko ny mittens sy ny scarf, ary nihazakazaka nankany amin'i Duane Reade aho (nanisy koba vitsivitsy sy fonosana vitsivitsy tamin'ny fangaro marketing). Misaotra ny Decider-in-Chief, tsy maintsy mieritreritra mialoha aho ho an'ny entana ao an-trano. Hanana lamba famaohana taratasy, mofo, jamina, salady, savony ary detergent fanasan-damba ampy ve aho haharitra mandritra ny herinandro ho avy satria mety tsy afaka miantoka slot famoahana avy amin'olona (avy any Amazon ka hatramin'ny Key Foods) aho mandritra ny tapa-bolana.
Misaotra ny Lehiben'ny mpanapa-kevitra izay tsy afaka hihaona amin'ny Mpanazatra ahy ao Crunch, na ireo mpitsabo ara-batana… noho izany - mba handeha indray (manaraka ny vaky kitrokoko amin'ny volana desambra), mila miankina amin'ny YouTube aho amin'ny zava-drehetra avy amin'ny fitsaboana. toro-hevitra amin'ny tari-dalana momba ny fomba hanaovana ny atody henjana henjana (tsy mandeha ny fomba fahandro).
Ny Decider-in-Chief, nanome ahy fotoana tsy nilana, dia nahafahako niteny tamim-pahatoniana tamin'ireo olona mahafinaritra mbola miasa ao amin'ny Spectrum sy Apple. Toa tsy maninona izy ireo amin'ny asany, ary feno fankasitrahana aho fa nanana olona hiresaka androany.
Fiainana miaraka amin'ny Zoom
Azoko atao ihany koa ny misaotra ny White House amin'ny fivoriana Zoom. Ankehitriny aho dia afaka mijery valandresaka ho an'ny mpanao gazety avy amin'ny fampiononana ny efitranoko (rehefa manao ny hoho aho mba tsy ho leo tanteraka). Talohan'ny nanakatonana ny fiarahamonina dia tsy maintsy nifoha aho, niakanjo, nandeha bus, metro, na taxi, ary nandany ora maro nankany sy nivoivoy tamin'ireo fisehoan-javatra ireo izay, imbetsaka kokoa noho izay dia nivadika ho fandaniam-potoana tanteraka. . Na izany aza, ny fiatrehana mifanatrika amin'ireo tontonana dia nahafahako nametraka ny fanontaniako ary nanantena valiny (mikorontana na tsia, fa farafaharatsiny mihoatra ny salady teny). Zoom dia naka ny safidin'ny fanontaniana teny an-tanako ary nanome ny fahefana ilay nivory ny fivoriana.
Manamora ny famitahana ny Zoom satria tsy manome ahy ny fahitana firy ny olona manatrika fivoriana. Nilaza ny olona ifandraisan'ny vahoaka fa misy am-polony, an-jatony, an'arivony… Tsy azoko atao ny mamantatra raha “vaovao sandoka” ity. Tsy haiko koa ireo boky navoakan'ny mpanatrika. Taorian'ny fihainoana fanontaniana vitsivitsy izay neken'ny mpikarakara ny fihaonambe, dia heveriko fa ny ankamaroan'ny fanontaniana dia noforonin'ny zanany lahy 3 taona raha nanamboatra sakafo maraina ho azy izy ho valisoa.
Avy eo koa ny momba ny sarontava. Voalohany dia nilaza ny Lehiben'ny mpanapa-kevitra fa tsy mila sarontava izahay. Ny "gripa" dia tsy haharitra ela ary ny sarontava vitsivitsy izay misy manerana an'i Etazonia dia tokony ho natokana ho an'ireo mpitsabo sy mpitsabo eo amin'ny lafiny voalohany. Mihevitra ny tenako ho tia tanindrazana aho, noho izany, rehefa nividy sarontava fandidiana, sy saron-tava azo nosasana ary saron-tava azo novidina ny namako, dia niteha-tratra aho satria olom-pirenena vanona; Tsy hanaisotra sarontava amin'olona mila azy bebe kokoa noho izaho aho. Oops! Tonga ny andro fanisana. Toa tsy nohamaivanin'ilay Mpanapaka hevitra ny fahaizan'ny "gripa" sy ny sarontava ilaina hatao. Rahoviana no tokony hanaovana azy ireo? Indraindray? Rehefa izaho ny bus / metro / taxi / sidewalk / mandro ??? Ny PR dia nifindra avy amin'ny “isaky” ka lasa “foana”.
Ny Decider-in-Chief dia nampanantena ihany koa fa ny "gripa" dia hanjavona amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona ary ho very tanteraka raha vantany vao manondrika ny tany mafana ny daffodil. Mafana izao (77 degre ao Manhattan), hitako ny daffodil avy eo am-baravarankelin'ny efitranoko - sady mamaky miaraka aho fa olona an-tapitrisany no marary ary maty noho ny COVID-19. Ho an'ny Decider-in-Chief, ity dia OOPS hafa ihany.
Mamela ahy hivoaka
Ny hoe «mivoaka sy mivoaka» dia lasa tombontsoa manokana fa tsy hetsika isan'andro. Ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Decider-in-Chief ihany no afaka mitondra ny limosin'izy ireo amin'ny fiaramanidina manokana ary miafina any amin'ny taniny any New Jersey na Florida isaky ny tiany. Ny kintan'ny sarimihetsika, ny pundits amin'ny fahitalavitra, ny mpitifitra ao amin'ny Wall Street, ary ny mpikambana hafa ao amin'ny klioba Rich and Famous (malaza ratsy) dia tsy manana olana amin'ny filatsahana manerana an'izao tontolo izao mankany amin'ny nosiny manokana, chateaux, retreats, mba hialana amin'ny fahasosoran'ny quarantine. Ho antsika sisa dia manana safidy isika, manohy miaina ao anatin'ny 1200 metatra toradroa (na latsaka), na sahy ary mivoaka mankeny amin'ny habakabaka. (Oh, saika hadinoko, valan-javaboary sy faritra fialamboly maro no nakatona).
Raha tsy misy ny haitraitra limos manokana, isika "olom-pirenena" dia voatery mampiasa fitateram-bahoaka (farafaharatsiny izay monina ao amin'ny foiben'ny COVID 19). Na izany aza, ny sarin'ny olona mipetraka ao amin'ny Metro any New York ataovy toy ny trano lehibe ny faritra mahantra any India sy Afrika Atsimo.
Mampalahelo fa manana ben'ny tanàna i New York izay manajamba ny mason'izy ireo mahantra indrindra izay tsy afaka mahazo trano, sakafo, fandroana, trano fidiovana… ny filàna fototra ilain'ny olombelona. Faly izy nanangona ny vola rehetra ho azy sy ny vadiny nefa tsy niraharaha izay tena nilaina. Raha tsy noho ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nantsoin'ny Lehiben'ny mpisolo toerana vaovao an'ny MTA, dia ho tao ireo lehilahy, vehivavy ary ankizy mipetraka amin'ny lalamby ambanin'ny tany New York mandra-pahafatiny ary naterina tany amin'ny kamio U-Haul izay ampiasaina ankehitriny. hitahiry faty.
Back to amin'ny Future
Hisy tsara kokoa rahampitso? Mampanantena ny mpahay tantara fa raha ny fomba fijerin'izy ireo dia “ho lany koa ity.” Notanisain'izy ireo ny andro ratsy / mahatsiravina an'ny Fahaketrahana sy ny Fihoaran'ny toe-piainana, ireo vonjy taitra isan-karazany izay navadikay tamim-pahombiazana (na farafaharatsiny namboarina) nanomboka tamin'ny SARS ka hatramin'ny Virus Nile. Ny mpahay siansa sy ny dokotera dia nahita fanasitranana na vaksinin'ny Polio, Kitrotro, Pox madinidinika, ary na dia ny fanafody hampaharitra ny ain'ny olona voan'ny Aids sy cancer aza.
Mampalahelo fa tsy nahita fomba hanasitranana ny zava-mahadomelina ireo mpampianatra dokotera ary ampahany lehibe amin'ny finiavana ara-politika ao Washington DC no nanaikitra avy amin'ny paoma lo, nivarotra ny fanahin'izy ireo mba hanaikitra manaitaitra iray hafa avy amin'ny Candy Man.
ANDRIAKAKY Ô. Andro hafa
Tsy nieritreritra mihitsy aho fa ny mifoha isa-maraina tsy misy kohaka na tazo dia hoheverina ho “andro voatahy”. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe tsy andriko ny hahita ny mpitsabo nify, na ny fahadiovan'ny nify. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hiahiahy momba ny fitsaboana ahy… mazava ho azy, hahita ahy ny dokoterako, hiresaka amiko an-telefaona, hifandray amin'ny fivarotam-panafody. Nahazo zava-mahadomelina aho, matory andro vitsivitsy, ary ho tsara toy ny vaovao. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe ny fitsangatsanganana amin'ny fanasan-damba dia ho lasa hetsika lehibe - manomboka amin'ny fonon-tànana, amin'ny sarontava, amin'ny fitaovana fanadiovana, manantena ny tsy hizara ny ascenseur amin'ireo mpifanila vodirindrina amiko, eny fa na dia miankina amin'ny rindrina na manodina vavahady aza dia mety hitarika ahy. ny fahafatesana.
Manohy manantena aho fa ireo andro / herinandro / volana / taona - dia nofy ratsy sy mampitolagaga lava ihany satria tena sarotra sy sarotra takarina ny zava-misy… fa manandrana aho. Vao haingana aho no nanatrika valandresaka ho an'ny mpanao gazety Zoom roa noforonina sy novokarin'ny WHO (World Health Organization). Ny Decider-in-Chief dia mikasa ny hampitsahatra ny fandraisany anjara amin'ny fikambanana, ary toa misy firenena hafa (farafaharatsiny) mandinika ny fifandraisan'izy ireo amin'ity masoivoho manerantany ity.
Nahaliana ahy ny zavatra ataon'izy ireo (ary tsy ataony), ary koa ny tombontsoa sy ny fifantohana ara-politika ao amin'ny vondrona. Na dia nandefa fanontaniana tamin'ny hetsika Zoom aza aho, ireo fanontaniako dia tsy noraharahaina tamin'ny “fotoana tena izy.” Natolotro an-taratasy izy ireo avy eo ary nalefa tamin'ny mailaka. Nahazo toky aho fa hahazo valiny amin'ny fanontaniako voalohany ny zoma 1 may (anio amin'ny 3 mey ary tsy manana mailaka avy amin'ny OMS). Nandefa fanontaniana fanampiny aho ny zoma (taorian'ny nampahatsiahivako ny PR fa mbola miandry valiny aho) - ary zahao amin-kafanam-po ny boaty boaty mba hahitana raha misy mariky ny fiainana (sy ny fahamendrehana) velona sy tsara ao amin'ny WHO.
Hanohy hanenjika an'i WHO aho. Miezaka mamantatra aho, iza marina no iza ao amin'ny WHO. Manana fandaharam-potoana mihoatra an'izay hita ao amin'ny tranonkalany ve ity fikambanana ity izay misy: fiomanana amin'ny vonjy taitra amin'ny alàlan'ny famantarana, fanalefahana ary fitantanana risika; ny fisorohana ny vonjy taitra sy ny fanohanana ny fampandrosoana ireo fitaovana ilaina mandritra ny valanaretina; mamantatra sy mamaly ireo fahasalamana tampoka ary manohana ny fanomezana serivisy ara-pahasalamana tena ilaina amin'ny toerana marefo.
Amiko dia tsy nahatanteraka ny fifandraisany am-bahoaka ny OMS. Hiova ve izany? Moa ve ny jery todika manerantany momba ity masoivoho ity, miaraka amin'ny teti-bola ho an'ny 2020-2021 $ 4.8 miliara (na $ 2.4 miliara isan-taona), dia hanjary mangarahara amin'ny asany, ary handray ny fananany ary tsy nahatanteraka sy nanome drafitra mivaingana sy feno. ny zavatra hataony amin'ny ho avy? Hiteny ny fotoana… Miaraha mandanjalanja.